Ndeapi misika yeUSDC | Ehupfumi Zvemari
Chimwe chezvirevo zvitsva zvekuti kuchengetedza kunobatsira ndezvekushandisa kuburikidza nechigadzirwa chine hunyanzvi uye panguva imwechete isingazivikanwe kune vakawanda vashoma nevepakati varimi senge misika inozivikanwa seUSDC misika. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kujekeswa kuti misika yemari yeUSD (USDC) yakavakirwa pamari yakavimbiswa zvizere yeUS dhora, iyo inoshanda sebhiriji pakati pemadhora muaccount yebhangi uye kutaurirana mukutsinhana crypto zvinhu.
Tengesa mukati BTC / USDC vaviri vaviri, ETH / USDC y USDT / USDC vakagoneswa kwemakore mashoma kwazvo. Nekushandisa iyi yakasarudzika uye yakaoma nzira yekudyara inoitirwa munhu wega uye vemasisitimari ekudyara kuitira kuti vagone kuisa madhora ekuUS kubva kumaaccount emabhangi, kushandura iwo madhora kuva maUSDC tokeni nekuaisa mumapuratifomu akasiyana emari edhijitari kuti vakwanise kuchinjana midziyo yekunyorera. .
Iyi sisitimu yekubata nenyika inogara yakaomesesa yemari yakanangana nevadiki vepakati nepakati vanofarira kushandura madhora ekuUS kuti vatengese neUSDC. Pashure nyoresa mumaminetsi mashoma, vatengi vanogona kuisa chiratidzo kumadhora eUS vachishandisa iyi sarudzo. Uku kushanda kunosanganisira kubatanidza akaundi yekubhangi uye kuendesa mari kuaccount account yekubhangi yakapihwa nebasa.
1 USDC misika: ndezvipi?
2 Vanotambura kurwisa
3 Kweretesa mari pamapuratifomu
4 Ngozi dzekushanda uku
5 Kubatanidzwa kwemari nyowani
6 Sarudzo yemapuratifomu edhijitari
7 Inowanikwa chaiyo mari
USDC misika: ndezvipi?
Kamwe mutengi paanoisa chiratidzo cheUSD, maUSDC tokeni anogona kuendeswa kune emari mapuratifomu edhijitari mune pfupi pfupi nguva. USDC yekutengesa mapara inogona kuunzwa ichipesana neBTC, ETH uye USDT, nechinangwa chekuisanganisira mapara matsva USDC mune ramangwana. Inogona zvakare kushandiswa nevatengi vanoda kutora USDC uye kudzikunura yakaenzana huwandu hwemadhora ekuUS kubhengi rebhangi.
Kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakanyanya inyaya yekuti kukosha kweiyo crypto zvinhu kunogona kuve yakanyanyisa kugadzikana uye zvisingatarisirwi. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti kuburikidza nenzvimbo dzakasarudzika idzi unogona kuwana mari yakawanda, asi nechikonzero chimwe chete iwe unogona kusiya maeuro mazhinji mumugwagwa. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kurasikirwa ingangoita ese masimendi akaitwa Chinhu icho pasina mamiriro ezvinhu chinogona kukanganikwa sezvo chinogona kupa zvinopfuura kamwe kusada kubva panguva dzino.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutaurwa kuti kana aya marudzi emabasa ari kutarisisa pakugamuchira kurwiswa. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mapuratifomu edhijitari ave nechokwadi chekuti zviyero zvese zveETH uye ETC zvinogona kuzadzisa mabasa avo nekuzvipatsanura munzira dzakasiyana. Nenzira iyi, ivo vakagadzira hunyanzvi sisitimu iyo inochinjisa ese ETH uye ETC anoisa kuburikidza ne chibvumirano chakangwara iyo inopatsanura mari mbiri, ichitungamira imwe neimwe bharanzi kukero yewallet. Izvi zvinodzivirira zviyero zviviri uye nekudaro zvinobvumidza iyo account kuti iverengerwe nemaviri mare.
Chimwe chikamu chekuongorora ndeche icho icho chinoreva kune mazwi echikwereti. Zvakanaka, mupfungwa iyi zvinofanirwa kujekeswa kuti kune avo vashandisi vakweretesa ETH yavo kune vamwe, vanofanirwa kufunga kuti mazwi echikwereti Vanoda kuti iwe ugamuchire iyo yakaenzana nhamba uye mhando yemari yemari yawakakweretesa mukati memazuva mashoma pamwe nezvakabvumiranwa kufarira. Anokwereta haakupi chikwereti chakaderera pane ichi, uye iye akakwereta haakupi chikwereti chero chimwe chinhu, zvisinei nezvakaitika panguva yekuwanikwa kwemari dzakakweretwa neiye anokwereta.
Kweretesa mari pamapuratifomu
Paunokweretesa mari, iwe uri kunyatso kupa upfumi uye kudzora kwavo mukutsinhana nekapepa pamwe nechido. Mari idzi dzinotakurwa kune anokwereta, ndiani anogona kuita navo chero chavanoda: isa odha, vhura chinzvimbo, nezvimwe. Kubva pane ichi chirevo, avo vane zviyero chaizvo, dzakakweretwa kana neimwe nzira, vane kodzero kune zvese zvavanogona. Kugona kuhwina navo panguva yevaridzi.
Kune rimwe divi, kana mumwe munhu akakwereta ETH, vanowanzozviita kuti vazvitengese kune vamwe vatengesi, kusanganisira vatengesi vemahara vasingazive kuti mari dzacho dzakabva kune mumwe munhu akazvikwereta. Vatengesi veSpot vanotengesa BTC yeETH ivo zviri zvavo vane zvaunotenga uye ndivo vanokodzera vanogamuchira huwandu hweETC inoenderana neyako ETH inobata panguva yeforogo.
Aya marudzi emashandiro akaomesesa uye zvirokwazvo havazi vese vatengesi vari munzvimbo yekuvhura zvinzvimbo. Hazvishamise kuti pane zvakawanda zviri panjodzi uye ivo vanogona kunyange kurasikirwa vangangoita ese capital akaiswa mari. Tatarisana nemamiriro aya, iyo kudzidza ndiyo mushonga wakanakisa kudzivirira mamiriro asingadiwe. Kune izvi, zvinokurudzirwa kwazvo kusarudza mapuratifomu edhijitari mukirasi ino yemari ine account yekuratidzira. Ivo vanonzi "Demo".
Iri kirasi reakaunzi chishandiso chekufunda mune mafambiro aya asi ivo vanofanirwa kudyara mumari chaiyo. Ndokunge, iwo mashandiro anoitwa mumari chaiyo kuti zvishoma nezvishoma vadzidze mhando iyi yekushanda kwakaomarara. Iwe unogona kuvandudza ivo sekureba sezvaunoda uye kusvikira iwe wanyatsoona kuti iwe wagadzirira kutora iyo hombe kusvetuka uye kusarudza mari chaiyo. Kwamunogona ita mashandiro kubatsira, asi panguva imwechete uchikusiya akawanda mairi munzira. Haasi ese mapuratifomu edhijitari eaya hunhu anopa ichi chishandiso chebasa uye nekudaro chisungo chako chinenge chiri chekutsvaga chinosanganisira sevhisi iyi kana imwezve yekupihwa.
Kubatanidzwa kwemari nyowani
Kazhinji, ava vanoshandisa mari vane nzira dzekuzvidzivirira kuchengetedza kwete chete zvavanofarira asiwo zvevashandisi vacho. Mupfungwa yekuti havatange vazivisa chinangwa chavo chekusanganisira mari yekudzivirira iyo kutengeswa kwemusika. Nekuti chero chiziviso pane chako chikamu chingatungamira kukukwidzwa kwemutengo pamberi pemari dzemari pamapuratifomu edhijitari dzisati dzavepo yekutengesa, zvichipa vatengesi vega mukana usina kunaka.
Sezvauri kuona, iri mushure mezvose zvakakwana system iyo isingakodzere kune vese vadiki nepakati varimi. Kwete zvishoma. Iwe haufanirwe kukanganwa izvozvo hausi kutarisana neyemari kudyara, sekutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa. Ivo vanotanga kubva pamhando dzakasiyana zvakasiyana uye zvivakwa kubva pakatarisana nemaonero. Kunze kwemamwe akateedzana ezvehunyanzvi kufunga uye kunyangwe kubva pakona yezvakakosha. Kunyangwe paine chokwadi chekuti iri hurongwa hwekudyara hwakavandudzika zvakanyanya mumakore apfuura.
Sarudzo yemapuratifomu edhijitari
Chero nzira, uye kana iwe uchizovhura zvinzvimbo kubva ikozvino zvichienda mberi, hauzove nesarudzo kunze kwekuburitsa kukosha kwekusarudza yakanaka digital digiti yemari. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti huwandu hwakanaka hwevashandisi vepamhepo vange vachibuda mumwedzi ichangopfuura iyo inomiririra kubiridzira kune izvo chaizvo zvinodiwa nevatengesi vevatengesi. Kana izvo zvakafanana, kuti ivo vane hunyengeri uye vanogona kukuunzira inopfuura rimwe dambudziko kwauri kubva zvino zvichienda mberi. Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo mukusarudza kwako.
Chimwe chezvinhu zvaunofanira kufunga nezvacho kubva mukuchengetedza ndechekuti aya mapuratifomu edhijitari mukudyara ari zvakanyatsozivikanwa nemasangano epasi rese anotonga. Ivo kazhinji vanobva kunyika uko kwavakagadzira masevhisi avo pamwe nedzimbahwe ravo. Uye izvo zvavano vimbisa kuita kwako kwese kweimwe isiri yepamutemo maitiro ayo anogona kukukonzera kuti iwe urasikirwe nemari kuburikidza nemaakaundi avo kana maisipo.
Inowanikwa chaiyo mari
Panguva ino, vashandisi veiyi kirasi yezvinhu zvitsva uye zvakaomarara zvigadzirwa vanogona kutenga nekutengesa kusvika kune yakakwira kwazvo nhamba yemadhora emari. Nechokwadi chese kuti kunyangwe vazhinji vacho havatoziva nezve kuvapo kwavo. Hazvishamisi kuti iwo musika chaiwo unoratidzwa ne shingaira uye mune izvo zvitsva zvinhu zvemadhijitari zvemhando dzakasiyana siyana zvinoonekwa mwedzi wega Nezvauchange uchikwanisa kushanda, ndiko kuti, kutenga nekutengesa chero nguva.
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi mamwe emari dzedhijitari idzo dzaunogona kushanda kubva kune idzi chaiyo nguva? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti rondedzero yacho yakati rebei sezvaunoona pazasi. Izvi zvinosanganisira BitShares, Burst, CLAMS, Dash, Decred, DigiBytem, ​​Dogecoin, Einsteinium, Ethereum Classic, Ethereum, Kuwedzera, Factom, FoldingCoin kana Florincoin, pakati pezvimwe zvakakosha.
Sezvawakacherekedza zvechokwadi, havazi vese vanogona kuve vanofarira kugamuchira kwavo mashandiro mune inotevera chizvarwa dhijitari misika. Izvo zvinodikanwa kuti iwe uzvizivise iwe pachako zvisati zvave izvo zvekuve nekutsungirira iyo isingadiwe mamiriro ezvinhu kune yako upfumi hupfumi sezvatakakuyambira kare. Hazvishamise kuti pane zvakawanda zvaunogona kurasikirwa uye zvishoma kwazvo kuwana. Usakanganwe kuitira kuti usatore kusagadzikana kusanzwisisika kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeapi misika yeUSDC?
Zvikamu zvishanu kutarisana nemusika wemasheya mu2019